Otu nwaagbogho agbahara nna ya obuna mgbe afo Iri abuo na asaa O gbaghapuru ya gachara. – Ọmọ Oòduà
Home / Art / Ọmenala ndị Igbo / Otu nwaagbogho agbahara nna ya obuna mgbe afo Iri abuo na asaa O gbaghapuru ya gachara.
Posted by: princessnwude in Ọmenala ndị Igbo Comments Off on Otu nwaagbogho agbahara nna ya obuna mgbe afo Iri abuo na asaa O gbaghapuru ya gachara.
Otu nwoke na nwa ya nwanyi biakotara onu ka mgbe afo Iri abuo na asaa onye obula gara uzo ya ma nwa ya. Ma nwa ya nwanyi gara n’uzo mgbasa ozi ogbara ohuru akporo twitter wee kowa ihe mere Oji gbaghara nna ya.
O kwuru na nti O gere mgbe Onyisi ozuzu aturu Ulouka ya na-ekwu maka mgbaghara mere ka obi ya di nlo ebe nna ya gbaghapuru ya noo.
Ọmenala ndị Igbo	2018-01-28
Previous: Quote of the Century: Esu is infinite love, and very patient
Next: Will Bitcoin crash in 2018?